Qarax Lala Eegtay Ciidamo Ka Tirsan Kuwa Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax Lala Eegtay Ciidamo Ka Tirsan Kuwa Itoobiya
Xuseen Axmed 10 October 2017 10 October 2017
Wararka naga soo gaaraya Degmada Waajid ee Gobolka Bakool ayaa waxa ay ku waramayan in halkaasi Qarax miino ah lagula eegtay Kolonyo Ciidan oo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee Ciidamada dowlada Soomaliya ka caawiya la dagaalanka Ururka Al Shabaab .
Ciidamada ayaa Qaraxa waxaa lagula eetay xili ay maraayeen wadada deegaanka Buurdhuxulle oo kala qeybiya Degmooyinka Waajid iyo Rabdhuurre ee Gobolka Bakool.
Qaraxa lala eegtay Ciidamada Itoobiya ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Ilaa iyo hada lama oga Khasaaraha ka dhashay Qaraxaasi.
Ururka Al Shabaab ayaa War ay ku qoreen Baraha ay ku leeyihiin Internet-ka waxa ay ku sheegeen in weerarkaas iyaga ay ka dambeeyeen isla markaana ay gaarsiiyen Ciidamada Itoobiya Khasaaro xoog leh.